Wararkii ugu danbeeyey Yerry Mina oo qarka u Saaran Manchester United? – Weheliye.com
Wararkii ugu danbeeyey Yerry Mina oo qarka u Saaran Manchester United?
August 4, 2018 A.Hussein Ciyaaraha 0
Kooxda Manchester United ayaa la soo warinayaa in heshiiska shaqsiga ah la gaartay xidiga difaaca uga ciyaara kooxda Barcelona iyo xulka Colombia ee Yerry Mina.
Jose Mourinho ayaa qorsheynaya in safkiisa uu ku soo kordhiyo difaac ka ciyaara difaaca dhexe inta uusan bilaaban ololaha cusub ee horyaalka Premier League,waxaana horay uu kaga quustay la saxiixashada difaaca Tottenham Hotspur Toby Alderweireld iyo xidiga England iyo Leicester City ee Harry Maguire.
Yerry Mina ayaa aad loola xariirinayay in uu ku biiri doono kooxda ugu guulaha badan horyaalka England ee Red Devills waxaana markan Mina iyo maamulka ugu sareeya kooxda ay wada gaareen heshiis shaqsi ah oo difaaca Barcelona uu Old Trafford ku imaan doono.
Mundo Deportivo ayaa qoreysa in Manchester United ay ku qancisay difaaca Colombia isla markaana wakiilkiisa uu kulan la qaatay xubno ka socda Old Trafford,waxaana kaliya ka harsan heshiiska Yerry Mina ee Manchester in labada kooxood ay isku afgartaan lacagaha ciyaaryahan uu kaga baxayo Camp Nou.
Ugu danbeyn Yerry Mina ayaa qeybtii labaad ee horyaalka Spain 2017/2018 ku soo biiray Barcelona waxaana tan iyo intaasi uu ku dhibtooday booska koowaad ee Bluagrana,laakiin xidigaasi ayaa sadex gool u dhaliyay koobka aduunka xulkiisa Colombia waxaana bandhiga uu ka sameeyay dhacdadii Ruushka uu soo jiitay kooxo fara badan oo yurub ka dhisan.
Duqa Muqdisho Eng Yariisow oo sheegay in la qabtay horjooge ka tirsan Al-shabaab
Total page view: 2,987